Global Voices teny Malagasy » Fanontaniana & Valiny: Fantaro i Pushker Kadel, manampahaizana manokana amin’ny fiteny, fanabeazana ary fampandrosoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Aogositra 2020 16:02 GMT 1	 · Mpanoratra Laila Le Guen Nandika avylavitra
Pushker Kadel, manampahaizana manokana manokana amin'ny fiteny, fanabeazana ary fampandrosoana. Sary natolotr'i Pushker Kadel.
Taorian'ny fanentanana nahitam-pahombiazana tamin'ny taona lasa tety anaty media sôsialy  nentina nankalaza ny fahamaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, hitohy mandritra ny 2020 ny tetikasa ifandrimbonana. Isankerinandro dia hisy hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline  ireo mpikatroka sy mpanandrateny samihafa ho an'ny fiteny, hizara ny zava-niainany, ny fanao tsara indrindra, ary ireo lesona azon-dry zareo tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny teratany, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'izay anjara toerana raisin'ny aterineto. Ity fanentanana ity dia fiarahana miasa eo amin'ny Rising Voices , ny Digital Empowerment Foundation , ary ny O Foundation .
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Pushker Kadel (@KadelPushker ) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Pushker Kadel (PK): Mpisehatra amin'ny fiteny , fanabeazana ary fampandrosoana aho, ary mirotsaka amin'ny fampiharana ireo hetsika mifototra amin'ny fanabeazana sy ny fiteny. Taompolo roa sy tapany teo ho eo no laniko tao Nepal momba ireo olana izao.
Tato ho ato aho tsy dia niditra mivantana tanaty fikambanana saingy kosa manampy ireo fikambanana sy olontsotra ho toy ny mpanamora na mpanofana. Manome ihany koa aho tolotra fanoloran-kevitra ho entina mandrafitra ireo tetikasa ho an'ny fiteny, fanabeazana ary ny fampandrosoana.
Talohan'izay, nandray anjara nivantana tao anaty vondrona roa momba ny fiteny aho : Dangaura Tharu  sy Limbu,  tany Andrefana itsy voalohany ary tany Atsinanan'i Nepal ilay faharoa.
PK: Fikasàko ny hiresaka momba ny filôzôfian'ny fanabeazana, ireo tanjona sy ny pôlitika ho an'ny firenena.
RV: Inona no tena antony manosika anao ho amin'ny fikatrohana an-tserasera ho an'ny fiteninao? Inona no fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao sy ny politikam-panabeazana ao Nepal?
PK: Ny tena hery fototra manosika ahy dia ny hanangana lentam-panentanana / fampahatsiarovan-tena eny anivon'ireo mpiara-misalahy tena ilaina, izay hanampy amin'ny fitondrana fanavaozana ny rafitra fanabeazana mba hanomezana fanabeazana tsara kalitao ho an'ny rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/18/149412/
 fanentanana nahitam-pahombiazana tamin'ny taona lasa tety anaty media sôsialy: https://rising.globalvoices.org/campaigns/twitter-asialangsonline-2019/
 nandray anjara nivantana tao anaty vondrona roa momba ny fiteny aho: http://ldcnepal.org/resources/
 Dangaura Tharu: https://en.wikipedia.org/wiki/Tharu_languages